site ha na 21-01-09
Njirimara nke ndị na-eji ahịhịa ahịhịa bụ ọrụ dị larịị, ọrụ dị mfe, yana ikike ịkpụchasị ike maka ihe ndị a chọrọ ịkpụ, ọkachasị ahịhịa, ma ha kwesịrị maka ala ahịhịa dị elu na nnukwu ogige. Onye na-asụ ahịhịa na-egbutu ahịhịa site na ndị na-akpacha ajị ...
Nke 22 Hortiflorexpo IPM Beijing Sept 16-18 2020
Ndị otu Zhengchida na-ere ahịa gara nnọkọ ngosipụta nke 22 nke Hortiflorexpo IPM Beijing n'oge Sept 16-18th, 2020. Emume mmeghe ahụ bụ ihe ngosi dị mma. Site na convid-19, nke a bụ 1st na naanị ngosipụta na anyị a ...
Akpaaka Mechanical Arms A mgbanwe nke Usoro
N'oge na-adịbeghị anya, Zhengchida nwere ụfọdụ ndị ọhụrụ nọ na ogbako ahụ, bụ ndị wetara arụmọrụ dị elu na mma kacha mma na ngwaahịa ahụ. Ha bụ Akụrụngwa Mechanical Arms. Arụ ọrụ mmepe akụrụngwa akpaka malitere na mbido 2019. E guzobere otu ndị ọrụ injinia nwere ahụmahụ dịka ...